အတတ်ပညာ | portal │ပညာရှင် Hans Kottke
Kaufbar Braunschweig – “စနစ်တစ်ခုထဲကပြိုလဲ…”
အဆိုပါ DRC-Purchase အရသာအစားအစာနှင့်ဖြစ်ရပ်များ၏ကျယ်ပြန့အတူလူမှုယဉ်ကျေးမှုအိမ်တော်ဖြစ်၏.
ချိန်းအကြံပေးခြင်းများနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းအကြံဉာဏ်အားဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခန်းနှင့်အတူ, ဝယ်လိုအားလည်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာ, Arabic သို့မဟုတ်ပြင်သစ်. အဆိုပါစီမံကိန်းများတွင် KreativBar, Sprachbar, DRC Center ကဂျာကင်အင်္ကျီနဲ့ဘောင်းဘီရှည်ကိုဆငျဒါမှမဟုတ်DRKFlüchtlingsarbeitအတွက်, အသွေးအားလှူဒါန်းခြင်းနှင့်ကြက်ခြေနီစေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းကိုလည်းသင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်.
Z.Zt. တစ်ဦးပြပွဲ running:
ကို “စနစ်တစ်ခုထဲကပြိုလဲ” များမှာ.
March 28th, 2019 | မိမိအ Kottke | Tags:: စနစ်တစ်ခုထဲကပြိုလဲ, Braunschweig, ပန်းချီကားများ၏ပြပွဲ, Kaufbar.
categories: 2019, ယေဘုယျ, Braunschweig, အတတ်ပညာ | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
လိမ်ညာ: အဆိုပါဘာသာစကား Bavarian ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲ AFD များအတွက် Roland stapler …
သီချင်း "မီယာ Ned!"Facebook ပေါ်မှာတစ်ဗိုင်းရပ်စ် hit ဖြစ်လာသည်, နှစ်ခုသန်းအမြင်များဆီသို့ဦးတည်သွား. Roland Hefter ၏သီချင်း AFD ဆန့်ကျင်နေတဲ့အသနားခံဖြစ်ပါသည်, 14 အောက်တိုဘာလအပေါ်ဒေသဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲများအတွက်အရာ 2018 Bavaria အများအပြားမဲအတွက်ကတိတော်များ…
အောက်တိုဘာလ 6, 2018 | မိမိအ Kottke | Tags:: AFD, ဘိုင်ယန်, ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲများ, လိမ်ညာ, မီယာဆင်း!, Roland stapler.
categories: 2018, ယခု, ယေဘုယျ, လင်္ကာ, အတတ်ပညာ, ဗီဒီယို | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
ဆင်းရဲမွဲတေမှုအကြမ်းဖက်မှုပုံစံဖြစ်ပါသည် – “အကြှနျုပျ၏ကိုယ်ပိုင်နှစ်ဦးလက်စွဲနှင့်အတူ” | ကမ္ဘာတဝှမ်းသီချင်း …
May 8th, 2018 | မိမိအ Kottke | Tags:: Armut, အကြမ်းဖက်မှုများကို, Musik, Song က, World.
categories: အတတ်ပညာ, ဗီဒီယို | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
ရှိတဲ့ဒျေါနီနီ Kalisch: စိတ်အားထက်သန်မှု၏ပန်းချီ …
ကျွန်မကလေးအထူးကု၌ငါ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဒီဂရီအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရှိတဲ့ဒျေါနီနီ. သူမသည်လက်တွေ့ကျတဲ့နှစ်တွင်ရပ်ကွက်သမားနဲ့ကျွန်မကျောင်းသားများခဲ့သည်. သား၏အရပ်ကွက်ပေါ်အလုပ်ငါ့ကိုပျော်စရာတွေအများကြီးပေးခဲ့တယ် – ငါသည်ငါ၏လူရွှင်တော်နှင့်အတူနည်းနည်းလေးတွေ (အသံဖမ်း, Harmonica စသည်တို့ကို) ခံစား.
သင်ပိုမိုတိကျစွာသင့်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ရှုရန်လိုလျှင်, သင့်ရဲ့သို့သွား၏ Gemäldegalerie.
အဘယ်သူသည်လိုလား, နိုင်လည်း ထိတှေ့ သင်တို့နှင့်အတူအယူ.
ဇန်နဝါရီ 23, 2018 | မိမိအ Kottke | Tags:: ရှိတဲ့ဒျေါနီနီ Kalisch, ပန်းချီ.
categories: 2018, ယေဘုယျ, အတတ်ပညာ, ဗီဒီယို | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
anorexia မှရုပ်ပြ: Ninette – ထူးအိမ်သင်မလုံလောကျ … – (anorexia nervosa)
"www.ninette.berlin လက်အောက်တွင်တနိုင်ငံလုံးယခုရရှိနိုင်, လက်လှမ်းမမှန်စားသုံးခြင်း၏ပညာရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အပုဂ္ဂလိကငွေကြေးထောက်ပံ့အပြန်အလှန်ပလက်ဖောင်းနှင့် NINETTE ပဏာမခြေလှမ်း. ပစ်မှတ်အုပ်စုသည်အထူးသဖြင့်11-15jährigeမိန်းကလေးများဖြစ်ပါတယ်, ၎င်းတို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများ.
"- ပါးလွှာအလုံအလောက်ပါးလွှာမဟုတ်ပါဘူး NINETTE" NINETTE ၏ဗဟိုအစိတ်အပိုင်းအပြန်အလှန်ရုပ်ပြဖြစ်ပါသည်. တွင် 11 အကျိုးဆက်များကယနေ့ကနေမိန်းကလေး Janette ၏သောဇာတ်လမ်းတပုဒ်ကိုပြောပြလိမ့်မယ်, anorexia ၏ရေဝဲသို့စက်ကိရိယာနှင့်သူမ၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစု၏ကုထုံးအကူအညီနဲ့အထောက်အပံ့တွေနှင့်အတူအသက်ပြန်ရှင်ဖို့တိုက်သော်လည်းလမ်းကို. တစ်နိုင်ငံလုံးအကူအညီနှင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အွန်လိုင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးထိုရုပ်ပြနှင့်တစ်ခုလုံးကိုပလက်ဖောင်းသို့ built ရကြ၏။ "
ပစ်မှတ်အုပ်စုသည်အထူးသဖြင့်11-15jährigeမိန်းကလေးများဖြစ်ပါတယ်, ၎င်းတို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများ. အဆိုပါဘက်ပေါင်းစုံအွန်လိုင်းအကြံပေးခြင်းန်ဆောင်မှုများပုံမမှန်အစာစားခြင်းအဘို့အ Frankfurt စင်တာထံမှများမှာ, ANAD e.V. နှင့် Libra E.V. ပေးအပ်. အဆိုပါပြည်ခိုင်ဖြိုးဖက်ဒရယ်ကနျြးမာရေးဝန်ကြီး Hermann Gröheလွှဲပြောင်းယူ.
ဇွန်လ 21, 2017 | မိမိအ Kottke | Tags:: anorexia Nervosa, ဇါတျရှငျဇါတျလိုကျ, anorexia, ဆေးဝါး.
categories: ယေဘုယျ, နောက်ခံ, အတတ်ပညာ, ဆေးဝါး | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
စာပေဒ Chronicle (timeline)
စာပေဟာကျွန်မတို့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အတော်များများကစာရေးဆရာများကြိုးစားခဲ့ကြ, ဒါပေမယ့်အနည်းအခွင့်ထူးများ, ကမ္ဘာကြီးကိုစာပေပိုင်မှ. ဤတွင်အရေးကြီးဆုံးစာပေဥပမာတစ်ခုအကျဉ်း Chronicle ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျတစျဆငျ့ scroll နဲ့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါရခြုံငုံသုံးသပ် “ဆိုက်ကိုမြေပုံ”. ရိုးရှင်းစွာအဝီကီပီးဒီးယားအပေါ်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ရရန်သင့် mouse ကိုအတူလိုချင်သောခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ပါ.
ဒါ့အပြင်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့: Playmobil နှင့်အတူကမ္ဘာ့ဖလားစာပေကစား သွားကြဖို့ Sommers ကမ္ဘာကြီးစာပေ
ဇန်နဝါရီလ 22, 2017 | မိမိအ Kottke | Tags:: စာအုပ်များ, မှတ်တမ်း, စာပေ, စစ်တမ်း, timeline.
categories: ယေဘုယျ, သမိုင်း, နောက်ခံ, အတတ်ပညာ | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
Mythos – Che ဂွေဗားရား၏အသံက …
ဖီဒယ်ကက်စထရိုအသေခံတော်မူပြီ. အများစုကဆယ်စုနှစ်ကျူးဘားအချို့သြဇာ စ. ကံကြမ္မာ. တစ်ဦးဒဏ္ဍာရီအဖြစ်ဖီဒယ်အားဖြင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် – သူ့ယခင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ် che ဂွေဗားရား – ဖွဲ့စည်းရန်လိမ့်မည်, မသေချာမရေရာဖြစ်ပါသည်. ဖီဒယ်အမြဲစတင်ပြီးတစ်ဦးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအစွန်းရောက်ပယ်ချ.
Che ဂွေဗားရားအားအများအပြားသီချင်းတွေကိုရှိပါတယ်, သူ၏အသက်တာဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်း.
ဒီဇင်ဘာလ 5, 2016 | မိမိအ Kottke | Tags:: che ဂွေဗားရား, ဖီဒယ်ကက်စထရို, Kuba, သီခငျြးမြား.
categories: ယေဘုယျ, အတတ်ပညာ, ဗီဒီယို | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
Ayub Ogada – Kothbiro … အာဖရိကန်, Music …
နောက်တဖန်အတဖန်ငါမယ့်ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေ့ကြုံခံစား: ငါ့အရေဒီယိုထုတ်လွှင့်အတွက်, များစွာသောသီချင်းများကို, ဒါပေမယ့်ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူပုံမှန်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များရှိပါသည်.
ကင်ညာတေးရေးဆရာ Ayub Ogada မွောကျပိုငျးလိုင်းပေါ်တစ်ဦး busker ခဲ့, သူရီးရဲလ်ကမ္ဘာ့ဖလားအားဖြင့်နှောင်းပိုင်း 80s အတွက်သင့်လျော်သောအာရုံကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ. သူဖန်ဆင်းသည်၎င်း၏ disarmingly ရိုးရှင်းပြီးအစီအစဉ်များကိုအတူ 1993 တစ်တည်မြဲအထင်အမြင် Make. တစ်အရှေ့အာဖရိကတူရိယာအပေါ်လှသောငြိမ်ဝပ်နှင့်အတူ – Lyra တစ်ဦးကိုခေါ် nyatiti – Ayub နောက်တဖန်အကျက်သရေတွေအများကြီးနှင့်နွေးထွေးသောအသံနှင့်တစ်ဦးသရုပ်ဆောင်အဖြစ်ဂီတအလယ်ဗဟိုခဲ့. သူကအားလုံး၎င်း၏ခံစားချက်များကိုနှင့်အတူအာဖရိကကိုပြသ…
August 22nd, 2015 | မိမိအ Kottke | Tags:: တောင်, Ayub Ogada, Kothbiro, Musik.
categories: 2015, ယေဘုယျ, အတတ်ပညာ | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
ဖျော်ဖြေပွဲ – 20 နှစ်ပေါင်း DIDF Braunschweig …
June 2nd, 2015 | မိမိအ Kottke | Tags:: DIDF, Kulturverein, Kurds, Türken, Völkerverständigung.
categories: 2015, ယေဘုယျ, Braunschweig, အတတ်ပညာ, ဗီဒီယို | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
စာမျက်နှာများ: 1234နောက်တစ်ခု
17 အသုံးပြုသူများသည် အွန်လိုင်း
Sun Jun 16th 11:47:22 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန် 2019